भिम उपाध्यायको भविष्यवाणी: नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री रामकुमारी झाँक्री
काठमाडौं । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव भिम उपाध्यायले नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री रामकुमारी झाँक्री बन्ने भविष्यवाणी दाबि गरेका छन ।
उनकै शब्दमा-यदि नेपालको भविष्यमा कोही महिला प्रधानमन्त्री भने त्यो रामकुमारी झाँक्री हुनेछिन । किनभने समयले माग गर्छ, के माधब नेपाल प्रधानमन्त्री हुन लायक थिए ? दुई–दुई ठाउँबाट चुनावमा हारेका होइनन् ? प्रचण्डले ल्याएर संबिधान सभामा मानोनयित गरेपछि माधब नेपालले प्रधानमन्त्री खाएको अकास्मात । केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्न लायक छैनन् भन्ने त देखियो पटक–पटक ।
एकता टिभी नेपालसंग कुराकारी गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन । माधब नेपालको त उमेर भइसक्यो तर पार्टीका दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका युवा नेताहरुले दबाव दिएर पार्टी एकतालाई भन्दा क्रान्त्रिकारी धार समाउनु जरुरी भएको तर ति नेताहरु धेरै चुकेको समेत टिप्पणी गरेका छन ।
नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर माधब नेपालको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी को नेत्री रामकुमारी झाँक्रीको जत्तिको हैसियत भएको नेपालमा कोही युवाती मात्र नभएर युवानै नभएको पनि दाबि गरेका छन । नारि भएर पनि उहाँ रामकुमारी झाँक्री को जस्तो प्रष्टता र एकरुपमा अघि बढ्ने ।
केपी ओलीले मान्छे व्यक्ति हत्या गरेर जन्मकैद १४ वर्ष जेल परेको त हो नि कुनै राजनीतिक मुद्धामा होइन । देश जनता र राष्ट्रको कुरा उठदा पार्टी, झण्डा र चुनाव चिन्ह महत्त्वहिन छ ।